Sonke siyazi ukuthi ubude bendabuko bob kwekhanda ufinyelela jawline. Kodwa kukhona izinhlobonhlobo eziningi le kwekhanda ethandwa phakathi kwabo - i square side nge esiphongweni. Iba enhle stylish, ngaphandle zokuchitha isikhathi ku okhulayo ezinde? Easy, uma alinge ukwenza kwekhanda ezinjalo.
Indlela enhle ehlukahlukene ukugunda izinwele zakho zizoshintsha esiphongweni ngenxa yokuthi kuba eside, kuthatha kancane isikhathi, futhi ushintsho kungaba kokubili ubude balo ukuma, lapho kungenzeka ukuze uvuselele wonke isithombe.
isikwele side nge esiphongweni kuyindlela enhle kakhulu ukushintsha umfanekiso waso kakhulu, ukwenza izici lula ukulungiswa kobuso bakhe, kanye gxila izici Ingaphandle ukuthi bayakufanelekela egcizelela.
Sizama ehlukahlukene isikwele side nge esiphongweni
Indlela yokwenza izinwele bheka njalo emavikini ambalwa ngezindlela ezahlukene? Easy! Udinga nje ushintshe bang! ubuhle bayo uzobe asiqokomisa nge umbono ngokuwina, indlela entsha ukuze wenze romantic futhi njengabesifazane - esiphongweni kanye nje ukusika? Kuyiqiniso!
Namuhla kuyinto ethandwa kakhulu kwekhanda bob nge esiphongweni obuphelele naphakathi zakudala, okusikhumbuza ukuma i arc. Kuyoba ukuthambisa isithombe, kuyoba stylish kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo emnene.
Ingafana onobuhle ngesibindi kwakwakhiwa lezinkanyezi, kuyilapho looking like Wayenza kubuya imfashini kunazo photo shoot? Khona-ke silingane esiphongweni esiqinile ifomu ngqo, kwaze kwaba maphakathi emabunzini ubude "Maxim", a Imbondela kancane phezu kwamehlo.
Okumangazayo, ngendlela ekhethekile kuzodala umphetho etshekile. Wabeka ezinsikeni zawo, uyobheka kakhulu kanye namanzi. I sithombe buhle esiphongweni, eyenziwe ngendlela wendlale "Ragged" nesitayela.
isikwele side nge esiphongweni, ohlangothini beveled
Noma isiphi isakhiwo izinwele nombala ukubukeka kahle ilungiswe side bob nge esiphongweni (isithombe). Lokhu kusinikeza ithuba diversify isithombe, njengoba siguqulwe sibalelwa zonke izinhlobo isitayela kanye izinwele. Kulesi etshekile umphetho ezihlukahlukene ongakhetha kwandisa izikhathi eziningi.
Side umphetho etshekile lula ukuguqulwa, kwanele ukususa usebe noma ukugwaza phezulu. Ngo ebeka Curves mnene, noma "amagagasi" kubukeka organically, isidingo ikhule eside.
Namuhla, inguqulo evamile futhi ezidumile nezinwele ezinjalo - ke esiphongweni wadala ngosizo Samandla. It kuzodala uhlobo labesifazane yesimanje abafuna ukubheka kalula, ngesikhathi esifanayo uzizwe ukhululekile futhi kulula.
ozinikezele abasha kakhulu abafuna ukubonisa ubuhle izinwele abanganaki futhi isikhumba obucayi ebusweni, khetha umphetho etshekile - kuyoba ukuvula amehlo akho futhi wenze ubuso uyakufanelekela nokubiyela.
Uma ufuna ukugcizelela ngendlela engavamile, ungakwazi ukusika esiphongweni yakho zigzagged, okwenza kube edabukile. Kodwa akumelwe sikhohlwe ukuthi kuzodinga kutfotjelwa isithombe, futhi ushintshe izinwele kancane, wanezela okungafani imicu langempela, ngeke ubuhlungu.
umphetho etshekile nge square side kuzokuvumela bheka okungavamile, ngaleyo ndlela uzophawula kunoma iyiphi inkampani. Futhi, ungakhohlwa ukuthi manje uzokwazi ukubheka nsuku zonke ngendlela entsha!
Izakhiwo abahlukile oqabulayo Bergenia: ungasifaka kanjani isicelo